Ihe oriri erimeri plasticndị nrụpụta & Ndị na-ebubata ya | Fukang
Ulo > Ngwaahịa > Ihe oriri erimeri plastic
F-9220a, a na-eme achịcha nri, na-ebuga ya na akụkụ niile nke mba ahụ, ugbu a, ndị ahịa na-eji ọtụtụ akụkụ onyinye ezumike, ihe ụmụaka ji egwuri egwu na ndị ọzọ; Site na mkpuchi nke 90 na mkpuchi aka, na-acha ọbara ọbara na-acha uhie uhie, ojii, ọcha, odo, na-acha akwụkwọ ndụ, ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ, ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ, ọkụ A na-ejikwa karama ahụ na mkpuchi nwekwara ike ịhazi ya.
F-900 na F-500g, mmanụ mkpụrụ osisi nwere ike ịnwe ngwaahịa nlekọta anụahụ, nri, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ngwaahịa. Enwere ike iji ya na mkpuchi romary nwere mkpuchi mkpuchi mkpuchi aluminom, mkpuchi na agba karama nwere ike ịhazi ya. Ka karama a bụ ihe a ma ama!
F-1000A Spiner nri nri, ọnụ zuru oke nwere ike ijide 1000 ml mmiri. Karama ọhụrụ ndị a kara aka, jiri mba ofesi maka onyinye ekeresimesi, ihe ịchọ mma, ụdị swiiti niile.
F-1000A karama nri, ọnụ zuru ezu nwere ike ijide 1000 ml mmiri. Ọhụrụ pụrụ iche pụrụ iche, nke ejiri ya nye onyinye onyinye ekeresimesi, ihe ịchọ mma, ụdị swiiti niile, wdg.
F650C mbukota igwe
Akpaaka akpaka nke karama 20oz.
Ọnụ zuru ezu nwere ike ijide karama mmiri nri 480ml, dayameta 37mm, ala dị ala 55 * elu 201mm, nwere ike iji mee ihendori, mmanụ a ,ụ, jam na wdg.
F-1000A karama nri, ọnụ zuru ezu nwere ike ijide 1000 ml mmiri. Ọkpụkpụ pụrụ iche pụrụ iche, ejiri ya nye onyinye ekeresimesi, ihe ịchọ mma, ụdị swiiti n’ụdị dgz.
F-350y ihe ọ bottleụ -ụ ihe ọ hasụ petụ anụ ụlọ nwere ikike nke 350ml, nke a na-ejikarị eme ihe maka ihe ọverageụverageụ ihe ọ ,ụverageụ, nkwakọ ngwaahịa mmiri, wdg. Ike imepụta kwa ụbọchị nke 18-20 puku iberibe.
Ogwe aka robot na-ejide preform karama ahụ, tinye ya na ọnọdụ nke igwe, wee nyefee ha na igwe na-agba ọkpọ, Mechie karama. kalama preform mere site ogwu ịkpụzi igwe. O nwere otu ihe bu ihe nwere oghere ano, Otu ebu ya na nke nwere oghere isii, Otu ebu ya na nke nwere oghere asatọ. ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke oghere dị iche iche nwere ọpụpụ dị iche iche. A ga-ebufe preform site na ebu ebu ka ịfụ igwe, mgbe ahụ site na ịfụ, wee mepụta karama udi.
Ndenye Nkọwa Ebe Amalite: Guangdong, China Aha aha: fukang Nọmba nlereanya: F-565A Njikwa aka: Mbipụta ihuenyo Alingdị akara: SCREW CAP, Ihe nkpuchi di elu Plastic :dị: PET plastic ite agba: doro anya Ike: 565ml size: DIA91mm * H95mm udi: gburugburu Agwa: BPA n’efu akwụkwọ: FDA, ISO 9001 logo: ihuenyo obibi, labelụ ihennyapade nlele: n'efu Ojiji: ite nkwakọ Ihe eji eme ụlọ ọrụ: CANDY